Home News Shirka Brussels oo go’aanadii ka soo bixi doono la baafiyay! Maxaa loo...
Shirka Brussels oo go’aanadii ka soo bixi doono la baafiyay! Maxaa loo aadayaa?
Shirka Soomaaliya ee la filayo in uu bishaaan Juulay 16-17 keeda uu ka furmo Magaalada Brussels ee dalka Belguim ayaa waxaa uu u muuqdaa mid qal-qal soo wajahay taas oo ka timid iyada oo ay dowladda Soomaaliya la daahday soo gudbinta qoraalo laga sugayay dowladda Soomaaliya. Dhanka kale Midowga Yurub ayaa iyagana dhankooda soo saaray qoraal hordhac ah oo ay ku qeexan tahay go’aanada ka soo bixi doonaan shirka. Qoraalkaan ayaa dhabar jab ku ah dowladda Soomaaliya, madaama uu sii sheegayo go’aanada shirka Brussels ka soo baxi doono! Waa maxay sababta shirkaas loo tagayo mar hadiiba la baafiyay Go’aanada ka soo baxaya.
Midowga ayaa iska fogeysay in ay iyaga yihiin cida sii daysay qoraalkaas. Waxaana ay eeda dusha uga tureen dowlada Soomaaliya.
halkaan ka aqriso warmurtiyeedka shirka
SPF Brussels Communique Draft for Partner Review 090718_gender
Previous articleJubbaland oo Garoonka Kismaayo ka soo celisay Taliye Bogmadow
Next articleMW Farmaajo oo caawa Beesha Caalamka qadka teleefanka ku canaanatay?
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir ka dhacay Dalka Marooko